Goobaha Sahaminta ee ugu Fiican ee Lacag Lagu Kasbado | Ebuno
Goobaha Sahaminta Ugu Fiican Ee Lagu Kasbado Lacag Online 2021
Waxaa jira boggag internet oo sahamin badan oo kaladuwan maanta kuwaas oo ku siiya inaad ku sameyso sahanno beddelkeedna aad bixinayso lacag yar marka la dhammaystiro. Marka websaydhkee kee mudan in la saxeexo oo runtii wakhti lagu qaato? Maqaalkan, waxaan isku dayeynaa sida ugu fiican ee aan ugu bixin karno macluumaad wax ku ool ah oo ku saabsan websaydhyada sahaminta ugu fiican ra'yigeenna.
Marka sidee lacag ugu sameysaa khadka tooska ah ee goobaha sahanka?
Ku sameynta sahanno lacag leh internetka waa hab fudud oo lacag lagu helo. Laga yaabee inaysan bixin wax badan laakiin inta badan boggaga waxay bixiyaan kaararka hadiyadaha, lacag caddaan ah oo dhab ah iyo faa'iidooyin kale oo loogu talagalay dadka ka caawiya shirkadaha inay si fiican u fahmaan suuqa. Afkaarta aad ku dhiibtay sahaminta waxay ka caawineysaa shirkadaha iyo shirkadaha inay soo saaraan badeecooyin ama adeegyo cusub oo wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira boggag been abuur ah oo kaliya kadib macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed qaarkoodna iyaga waligood lacag siinin kaqeybgalayaasha. Tani waxay ku baaqeysaa feejignaan marka aad dooranaysid boggaga inaad waqtigaaga geliso si looga fogaado inaad lacag lumiso ama waqti lumin.
Goobaha sahaminta ee ugufiican waxay siiyaan dadka isticmaala siyaabo kala duwan oo ay ugu ridaan abaalmarintooda. Fursadahaan lacag bixinta waa PayPal, Lacag bixinta visa kaarka deynta, Starbucks, Walmart, Amazon, Google Play, jeeg boosta lagu soo diro, xeerarka ciyaarta ee khadka tooska ah, badeecooyinka jirka laga helo, tabarucaadka sadaqada ama kaararka hadiyadaha ah oo bilaash ah. Qaar ka mid ah goobaha sahaminta sharciga ah ee halkaa ku yaal waxaa ka mid ah Ebuno, CashKarma, Valued Opinions, Opinion Outpost, Inbox Dollars, LifePoints, MyPoints, Survey Junkie, Swagbucks, Toluna, Vindale Research, PrizesRebel, Pinecone Research iyo Branded Research iyo kuwo kale.
Dulmarka guud ee bogagga ku xusan qodobkaan:
Ebuno waa degello sahan oo leh barxad casri ah oo si fudud loo isticmaali karo taas oo inta badan raaxo leh gaar ahaan marka aad isticmaale cusub tahay. Waxaan halkan ku Ebuno runti diirada saara waxbadan si aad uqaban karto sahanada ugufiican ee suurto galka ah si loo kordhiyo dakhligaaga loona keydiyo waqtiga ugu badan ee suurtogalka ah.
Marka aan u nimaadno waxyaabaha wanaagsan. Immisa ayaad kasban kartaa? Muddo intee le'eg ayay yihiin sahannada caadiga ah? Immisa jeer baa lagu baaraa? Immisa ayey le'eg tahay wax kasbashada? Sidee buu u shaqeeyaa barnaamijka gudbinta? Ma heli kartaa wax gunooyin ah?
Immisa ayaad ku kasban kartaa Ebuno?
Tani had iyo jeer waa su'aal adag oo laga jawaabo isla markaana ma bixin karno jawaab sax ah sidoo kale. Dhammaantood waxay ku yimaadaan cilmiga bulshada iyo meesha aad joogto. Wadamada qaar waxay leeyihiin celcelis aad u sareeya oo bixiya mid kasta oo dhameystiran maadaama shirkadaha u muuqdaan inay bartilmaameedsanayaan dadka halkaas ku nool oo ay diyaar u yihiin inay bixiyaan wax badan fikradooda. Wadamada ugu mushaharka badan badanaa waa: Finland, Sweden, Norway, Switzerland, Jarmalka, Australia, Denmark, USA, UK, Austria, United Arab Emirates iyo Saudi Arabia.
Xitaa haddii waddamada aan kor ku soo xusnay ay yihiin kuwa ugu dakhliga badan sahankiiba macnaheedu maahan inaadan kasban karin qaddar wanaagsan goobaha sahanka lagu bixiyo. Wadamada sida Japan, France, Italy, Spain, Russia iyo Brazil ayaa leh dalab aad u sareeya oo aan la daboolin shirkadaha sahaminta taas oo macnaheedu yahay inay jiraan sahanno badan oo ay heli karaan isticmaaleyaashani.
Marka intee in le'eg ayaad kasban kartaa? Waa hagaag celceliska bixinta halkii sahan waxay ku saabsan tahay $ 0.5 USD halkii dhammaystiran iyo celceliska waqtiga sahannadani caadi ahaan waa qiyaastii 7-8 daqiiqo. Fadlan maskaxda ku hay in qiimayaashani ay aad u kala duwanaan karaan iyadoo kuxiran dhowr arrimood.
Sidee ayuu howsha baaritaanka u shaqeeyaa?
Haddii aadan sameynin sahamin ku saabsan websaydhada sida Ebuno kahor, waxaa laga yaabaa inaadan aqoon u lahayn waxa shaashadu tahay. Shaashad ayaa ka soo baxda marka qofku uusan buuxinin shuruudaha sahanka gaarka ah ee la galay. Waxaan isku dayeynaa inaan kugula mid dhigno ka hor intaadan soo galin sahan sida ugu macquulsan laakiin nasiib daro, ma helno shuruudaha saxda ah ee sahaminta sidaa darteed waa wax aan macquul aheyn in la helo boqolkiiba 100% u dhigma. Daaran Ebuno, waxaad heli doontaa qiyaastii 30% heerka guusha ee sahaminta taas oo aad ugafiican heerka warshadaha.
Gudbinta iyo gunooyinka
Ebuno waxay ku siisaa nidaam tixraac ah kaas oo ku siinaya 10% waxa gudbintaadu ka sameyso sahaminta. Markaa haddaad u gudbin lahayd 100 qof adoo adeegsanaya URL-kaaga qaaska ah, qof walbana wuxuu dhammaystirayaa 20 sahan oo celcelis ahaan yahay $ 0.5, waxaad kasban lahayd $ 100! Waxa kale oo aad ku kordhin kartaa dakhligaaga hawlo kala duwan oo dhaqaajinaya koror ku meel gaar ah oo ku saabsan inta sahan kastaa bixiyo. Hoos waxaa ku yaal sawirka hawlaha kala duwan ee ay bixiso Ebuno.
Hadaad danaynayso ka mid noqoshada Ebuno, booqo bogga hore ee
Saxeexid Daraasadaha Lacagta La Bixiyay ee Ebuno
Dhammeystirka sahannada lacag bixinta ah ka sokow, waxaad sidoo kale lacag ku kasban kartaa adigoo ka baaraandegaya internetka mashiinkooda raadinta ee la oggolaaday, adigoo adeegsanaya barnaamijkooda moobiilka ama daawashada fiidiyowyada. Waad kasban kartaa gunno haddii aad saxiixdo ka dibna aad dhibco ka hesho markasta oo aad qabato howlahan kala duwan. Waxaad markaa u adeegsan kartaa dhibcaha si aad ugaash ugu sameysid dukaamo kala duwan ama lacag celin. Celceliska bixinta waa inta udhaxeysa $ 0.4 iyo $ 2.
Xayiraad Swagbucks Gudiga Sahanka
Waxaad ubaahantahay inaad ahaato 13 sano iyo wixii ka weyn oo aad tahay muwaadin u dhashay Australia, Canada, UK iyo USA ama wadan kale oo la ogolaaday.
Saxeex ku Swagbucks
Waxaad bilaabeysaa adeegsiga boggan adigoo abuuraya muuqaal si nidaamku kuugula jaan qaadi karo sahannada la xiriira dookhaaga macaamiisha. Intaas ka dib, waxaad ku buuxin kartaa sahanno ku jira qalabkaaga gacanta ama kombiyuutarka waxaadna ku kasban kartaa dhibco sahan kasta. Mar dambe, waad ku furan kartaa dhibcaha kaararka elektarooniga ah ama paypal.
Xayiraad Survey Junkie Gudiga Sahanka
Waxaad ubaahantahay inaad jirtid 16 sano.
Saxeex ku Survey Junkie
Goobtani waxay kuu oggolaaneysaa inaad kasbato lacag caddaan ah dhammaystirka sahannada internetka, dukaamaysiga, iibinta rasiidhada, ciyaarida iyo daawashada TV-yada iyo fiidyowyada. Boggu wuxuu ku siin doonaa gunno ah $ 5 diiwaangelinta waxayna ku siisaa fursado badan oo lacag bixin ah. Celceliska lacag-bixinta waa inta udhaxeysa $ 0.10 iyo $ 0.025.
Xayiraad InboxDollars Gudiga Sahanka
Waa inaad jirtaa 18 sano iyo wixii ka sareeya.
Saxeex ku InboxDollars